Ec-cube အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက် - Aerial Yangon
About The Ec-cube Ecommerce website
Ec-cube Ecommerce website သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် No. 1 Ecommerce Platform တစ်ခုဖြစ် ရပ်တည်လာဆယ်စုနှစ် ၃ ခုတိုင် ရှိခဲ့သော Platform တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရောင်းသူနဲ.ဝယ်သူ အဆင်ပြေချောမွေ.စွာ ရောင်းဝယ်လိုသောကုန်ပစ္စည်း ၊ ဝန်ဆောင်မှု စသည့်တို.ကို စျေးဆိုင်ကြီးတစ်ခု သဖွယ်တည်ဆောက်ပေးထားပြီး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Admin အနေဖြင့် မိမိတွင် ရှိသော Stock များထည့်သွင်းထားနိုင်သလို ၊0Stock ဖြစ်နေသော Items များကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Admin ကိုယ်တိုင် Product အသစ်တင်ခြင်း ၊ Content အသစ်ရေးတင်ခြင်းများကို လွယ်လင့်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်လာသော Order များကိုလဲ အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ User အနေဖြင့် မိမိအားမည့်အချိန်နှင့် Deliver ပို့ပေးရမည့် Data အသေးစိတ်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေး ငွေချေ စနစ်ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဝယ်သူဘက်မှလည်း အချိန်နေရာမရွေးတစ်နေရာထဲတွင် အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဝယ်နိုင်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေသော စျေးဝယ်ရောင်း Platformတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ဆိုင်ခန်းခ၊ဝန်ထမ်းစရိတ်သက်သာစေပြီး ၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ. အသုံးစရိတ်လျော့ကျခြင်း။
အချိန်ပေးစရာမလိုပဲ ၂၄နာရီ ပတ်လုံး Website ပေါ်တွင် စျေးရောင်းနိုင်ခြင်း။
User စိတ်ကြိုက် Deliver Company ရွေးချယ်နိုင်သလို ၊ ပို့ပေးလို့ရနိုင်မည့် အချိန်အားလဲ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
ဝယ်သူဘက်မှ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ငွေပေးချေမှု ၊ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သောကြောင့် အရောင်းအဝယ်အခက်ခဲပြသနာများ လျော့နည်းစေနို်င်သည်
Ec-cube Ecommerce Website Package Plan
.com,.net,.org .com,.net,.org .com,.net,.org
Ec-cube Ec-cube Ec-cube
No No Alpha SSL
1 time per week 1 time per week 1 time per week
Using Our Template Customize Template Customize Template
Login Form, Order Form, Order Cart, Product Search Box, Product Description Login Form, Order Form, Order Cart, Product Search Box, Product Description Customize function (Coupon , Live chat, SMS integration)
All Device (Mobile, Tablet, Deskstop, Laptop, Etc.,) All Device (Mobile, Tablet, Deskstop, Laptop, Etc.,) All Device (Mobile, Tablet, Deskstop, Laptop, Etc.,)
All Browser (Firefox, Mozzila, Chrome, Etc.,) All Browser (Firefox, Mozzila, Chrome, Etc.,) All Browser (Firefox, Mozzila, Chrome, Etc.,)
2 New Banner Design3New Banner Design5New Banner Design
200 Products Importing 300 Products Importing 400 Products Importing
Facebook, Twitter, Youtube, Etc., Facebook, Twitter, Youtube, Etc., Facebook, Twitter, Youtube, Etc.,
Only 1 APL Only 1 APL Only 1 APL
Free 1 year (2 time) Free 1 year (2 time) Free 1 year (3 time)
1 or2weeks2or3weeks4or5weeks
Click Request Quotation Click Request Quotation Click Request Quotation